लामखुट्टे समेत नभाग्ने जन्तरमा किन जाग्यो नेताहरुको विश्वास ? spacekhabar
लामखुट्टे समेत नभाग्ने जन्तरमा किन जाग्यो नेताहरुको विश्वास ?
कोरोनाले आक्रान्त बनेकोे विश्व बजार अहिले ठप्प जस्तै छ । तर, कोरोनासँग सम्बन्धि उपकरण र औषधिको भने व्यापक मात्रमा बिक्री वितरण भइरहेका छन् । चाहे त्यो काम लाग्ने होस् या नहोस् मानिसहरु उपभोग गर्ने हतार गरिहाल्छन् । यस्तै हतारो हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुमा पनि भएको देखियो ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागि भएका सबै जसो नेताहरुको गलामा निलो रगंको कार्ड झुन्डयाएको देखियो । झट्ट हेर्दा परिचय पत्र जस्तो देखिने यो कार्ड कोरोनालाई भनाउने बेसारसँग मिल्दोजुल्दो रहेछ । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोनाको अचुक औषधि बेसारको सेवनमा जोड दिइरहँदा उनकै पार्टी नेताहरु भने पंहेलो बेसारलाई छाडेर निलोमा आकर्षित भएको देखियो ।
त्यसरी कार्ड भिर्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र बहालवाला गृहमन्त्री रामबहादुर थापासम्म रहेको छन् ।पार्टीले नै यो कार्ड बियोन्ड द वाल ट्रेडिङ कम्पनीबाट खरिद गरेको हो ।संसदको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काका छोरा विप्लव केसीको सो कम्पनीले निर्वाध रुपमा भाइरस रिमुभिङ कार्ड बेचिरहेको छन् ।
कुनै नेतृको छोरोको बिजेनेस भनेर सर्वसाधारण जनतालाई नै भ्रममा पार्ने गरी कार्ड झुन्ड्याउन नेताहरुलाई कस्तो अप्ठयारो नलागेको ?
कोरोनासम्बन्धी कुनै प्रविधि वा औषधि प्रयोगमा लैजानुअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने भएपनि एक्कासी बजारमा देखिएको यो कार्ड कसको मिलोमत्तोमा आइपुग्यो भन्ने चासो हुन थालेको छ।
यसरी गलामा कार्ड झुन्याएको भरमा सजिलैसँग कोरोना भाग्ने भए विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरु औषधिको अनसुन्धानमा किन अहोरात्र खटिई रहनु पर्दथ्यो ।
घाटीमा कार्ड झुन्डाउँदैमा कारोना लाग्दैन भन्ने रुढीवादी परम्परामा बाँधिएका नेताहरुबाट आमूल परिवर्तन होला भन्ने आशा गर्न पनि बेकार छ । केटाकेटी हुँदा धामिले बोक्सी,भूतप्रेत लाग्दैन भनेर जन्तर लगाइदिन्थे । ठीक त्यसै गरी नेताहरुले अहिले कोरोना भगाउने जन्तर लगाउन थालेका छन् ।
नेताबाटै जनमानसमा भ्रम फैलाउने खालको काम भएको भन्दै विज्ञदेखि सर्वसाधारणसम्मले चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले तातोपानी र बेसारले कोरोना भगाउँछ भन्ने तर्क गरेर दुुनियाँ हँसाए जस्तै नेताहरुले पनि कोरोना झुन्डयाएर फेरि दुनियाँ हँसाउने काम गरेका छन् ।
यो कार्डले दुई मिटरसम्म भाइरसलाई निष्क्रिय बनाउँछ भन्ने हल्ला पिटिएको छ। तर, चिकित्सकहरुले भने कोरोनाबाट बच्ने र बचाउने कुनै औषधि र प्रविधि विकास नभएको बताइरहेका छन् ।
बियोेन्ड कम्पनीले चीनबाट १० हजार थान यो कार्ड नेपाल ल्याएको खुलेको छ। नेकपाले एउटा कार्डलाई भ्यादसहित ६ सय २५ रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । चीनवाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गर्दा त भ्रष्टाचार भयो भने यसको त कुनै नगरौ ।
पछिल्लो समय कतिपय सांसदले पनि त्यो कार्ड लगाएर संसद्को बैठकमा उपस्थित हुन थालेका छन्। । नेपालका नेताहरुको घाटीमा झुन्डिएको कोरोना जन्तर देखेर विश्व स्वास्थ्य संगठनका पदाधिकारीहरु पनि अचम्मित भएका छन् ।
कोरोनाभाइरसबाट सुरक्षित राख्न सक्ने त्यस्तो कुनै कार्ड विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अथवा अरू कुनै अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्रमाणित भएको छैन । सरकारमै रहेका नेताहरुले प्रयोग गरेको कारोना भगाउने कार्डको बारेमा स्वास्थ मन्त्रालयले पछि मात्र थाहा पाउनु हास्यास्पद लाग्छ ।
यहाँ कतिपय जनताहरु पेटभरी खान पाए पनि कोरोनासँग लड्न सकिन्छ कि भन्ने अवस्थामा छन् ।तर नेताहरु भने सम्पूर्ण रुपमा सुरक्षित रहेर पनि लामखुट्टे भगाउने झै सम्झेर कोरोना भगाउने कार्ड झुन्डयाएर ढुक्क भएका छन् ।
प्रमाणित नभएका यस्ता सामग्रीले आम जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने हुँदा तत्काल छानविन गरी कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा धेरैको मत रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार १४, २०७७, ०१:४२:००